Nyore Rider mbeu | MyWeedSeeds.com
Nyore Rider mbanje mbanje ndiwo muchinjiko pakati pekutanga maruva indica uye sativa. Iye anozivikanwa nekushomeka kwake kunoshamisa - kubudirira mukati, kunze, kana mune greenhouse. Chero zvazvakakomberedza, Easy Rider ichaburitsa yakareba, yakazara mbanje buds uye inoshamisa inorema, inonamira pakati cola (pamusoro bud). Ose mabukira ake akazara neTHC gland uye nebwe. Kana iwe uchikura Nyore Rider kunze, iwe unogona kuona imwe shoma yepepuru coloring nguva isati yakohwa. Nebumbiro rake rakaomarara, Easy Rider anoshora hosha zhinji uye achiburitsa gohwo repamusoro. Iye zvakare ari nyore kuumbika. Kukura kwake kwakakora uye kwakasimba, iine mativi emakwenzi madzinde. Iwe uchazoda kuona yakanaka kwazvo kufefetedza, nekuti hombe mbanje yake buds inogona kukanganiswa nekuumbika. Ichiri kukura, Easy Rider mbanje inogadzira kunhuhwirira ine zvishoma hashy undertones. Iwe uchamuwana kuravira kwake kutapira uye kwakaringana kuenzana. Iye akanaka, akasimba hutsi uyo anokupa iwe wakasarudzika muviri wakakwira.